Mahajanga : Lehilahy iray tratra teo ampikasana hanolana zaza 6 taona
Soa fa nisy nahatsikaritra ny fikasan-dratsin'ity raim-pianakaviana ity fa raha tsy izany dia simba ilay zazavavikely vao enin-taona monja. Teny Tsararivotra, lalana mihazo an'Amborovy no nitrangan'ity toe-javatra mampalahelo ity.
Mpiambina tao amin'ny orinasa FOAM no nahatsikaritra kamiao nijanona nanoloana ny orinasa saingy nitampina gony avokoa ny fitaratra tamin' ny varavaran-kelin'ity fiara ity. Rehefa nohatoniny akaiky ary nojereny ny zava-nisy. Rangahy efa miboridana ary manaboridana zazakely no tazany tao.
Avy hatrany izy dia nilomay niantso ireo Zandary nanao fiambenana izay tsy lavitra teo. Rehefa tonga ireo Zandary, mbola tratra teo izy, ary teo an-dalana hanao ny fikasan-dratsiny. Avy hatrany dia nosamborina ary naterina tany amin'ny biraon'ny Zandary.
Nandritra ny fanadihadiana no nahalalana fa zaza mipetraka ao aminy ihany noho ny hasarotan'ny fiainany, ity saika ho haolany ity. Nandà moa ity lehilahy ity na dia tratra teo ampanaovana fanolanan-jaza aza. Efa natolotra ny Fitsarana io maraina io kosa ny raharaha.